Ciidanka ammaanka oo qabtay nin argagaxisanimo looga shakisan yahay | Somaliska
Nin da’diisa lugu sheegay 38 jir ayaa lugu qabtay deegaanka Småland ee dalkaan Iswiidhan. Ninkan ayaa loo heeysta isku diyaarin farsameeyn bam. Qabashadiisana waxaa ay ka dambeeysay ka dib markii booliska Talyaaniga ay farta ku fiiqeen.
Degmadda Nässjö ee ka tirsan Jönköping ee dalkaan Iswiidhan ayaa ciidanka ammaanka ee Säpo oo kaashanaya booliska waxaa ay u dhaceen guri ku yaala oo ay ku qabteen ninka argagaxisanimada lugu tuhmayo. Ciidanka Talyaaniga oo isha ku hayey dhaq dhaqaaqa ninkan ayaa u sheegay ciidanka ammaanka Iswiidhan in uu isku dayey in internet-ka ka iibsado 400 kiilo oo laga sameeyo waxyaabaha qarxa sida uu ku waramayo telefeeyshinka SKY ee dalkaasi. Dhinaca kale ayaa dacwad oogaha u qaabilsan xagga ammaanka, ayaa sheegay in qof looga shakiyey falkaas la amray in la soo qabto, kaasoo haatan ay booliska degmada gacanta ku hayaan.
“Gacan ku soo dhigista waxaa ay aheyd mid ka baxsan waajibkii ina saarnaa, waxaana ka hortageeynay fal halis ah oo ka dhaca meel, booliska gobolkana ay arrintaasi gacan ka geeysteen”, aeey tiri Åsa Nilsson oo ah madax waaxda dembi baaritsta ee ciidanka ammaanka. Saxaafadda maxaliga ah oo hadal heeysa ninkan ayaa tilmaamay in ay timid qabashada ninkan waqti haboon oo loogaga hortagay fal halis ah oo lugu wax yeeleeyn lahaa bulshadda. Dhinaca kale ninkan ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo heeysto.
“Waxaa uu inkiray eedeymaha ku wajahan, balse tafaasiil intaa ka baxsan ma bixin karo, waxaana eeynaa xilliga soo socda” ayuu yiri qareen Mikael Svegfors oo u waramayey wargeyska Jnytt.
Booliska xagga ammaanka u qaabilsan oo kaashanaya Agnetha Hilding Qvarnström, oo madax ka ah hey’adda amniga qaranka ayaa baaraya xaalada ninka loo heeyso argagaxisanimadda. Mana jirto war dheeri ah oo intaas dhaafsiisan oo la xirriira warbixinta ay Talyaaniga u soo gudbiyeen Iswiidhan.
Magaaladda Hamburg ee dalka Jarmalka oo mindi dad lugu weeraray